ब्रुनो पोन्टीरोली: योग अभ्यास गरिरहेका जनावरहरूको चित्रहरू क्रिएटिव अनलाइन
क्यामिला एक्सपोजिटो | | कलाकारहरू
ब्रुनो पोन्टीरोली बेतुका तर्क र एक विश्व कल्पना गर्नुहोस् paradoxes। आफूलाई अतियथार्थवाद वा दादावादमा वर्गीकरण नगरी विश्वको नयाँ संस्करणको प्रस्ताव राखेर उसले आफ्नै कामलाई यसरी परिभाषित गर्दछ। आफ्नो भर्खरको स In्ग्रहमा, उसले यी विचारहरूलाई छविहरूको माध्यमबाट जीवन्त बनायो जनावरहरू योग अभ्यास गर्दै.
कलाकार एक सपना देख्ने व्यक्ति हो, र निरन्तर कल्पना गर्दछ नयाँ परिप्रेक्ष्य वास्तविकता को जहाँ प्रकृति फरक र रमाईलो रूप लिन्छ। उसको काम मिल्छ बेतुका एक संग तपाईंको कल्पना को धेरै स्वच्छ टेकनीक र सटीक, र एक धेरै विस्तृत रंग सिद्धान्त।
ब्रुनो उसको ठूलो प्रयोग गर्दछ कल्पना उसको पक्षमा। यस अवस्थामा, हामी गाईहरु आफ्नो संसारमा छ लचिलोपन देख्न सक्छौं।
तर यो तिनीहरूको ब्रह्माण्डमा जनावरहरूको अन्त्य हुँदैन। सबै कुराको जीवन हुन्छ; स्नोमेन र क्लाउडमा बोन स्ट्रक्चर हुन्छ, मर्मेडहरू सँगसँगै माछा र अन्य बकवासहरू छन्। सम्भाव्यले अर्थ बनाउँदछ, तल तल छ र सबै कुरा सम्भव छ।
ब्रुनो पोन्टीरोली एक धेरै स्पष्ट कल्पना छ र सपनाहरु बाट दूर हुन्छ। उनले सोधे कि उनको कामलाई गम्भीरतासाथ नलिनुहोस्, र हामी यो बच्चाहरु जस्तै गरी रमाईलो गरी रहेछौं। सिर्जना गर्दछ दृश्य कविता उसको वास्तविक छविहरूसँग, र हामीलाई प्रोत्साहित गर्दछ सन्दर्भ को कल्पना गर्नुहोस् आफ्नो चित्रहरु को भ्रम पूरा गर्न को लागी। प्रत्येक व्यक्तिले केही फरक देख्नेछन्, र त्यसमा निहित छ Magia उनको कला को।
जब उसको टाउकोमा केहि छ तपाइँका सबै विचारहरू लेख्नुहोस् र पेन्सिल वा भारत मसीमा स्केचहरू बनाउँदछ, त्यसपछि ती छनौट गर्नुहोस् जुन उत्तम स्तरमा पेन्टि make बनाउनको लागि उत्तम हुन्छ। यस प्राविधिकले तपाइँलाई जे हुन सक्छ कुनै पनि त्याग्न सहयोग गर्दछ बेमानी र सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका पत्ता लगाउनुहोस् वास्तविकता हल्लाउनुहोस् हामी सबै बाँच्दछौं। ब्रुनो पोन्टीरोली मिश्रण ब्रह्माण्डहरू र हामीलाई चीजहरूको अर्थ पुनर्बहाली गरेर खुशी पार्दछ। उहाँको काम, पक्कै पनि, ध्यान नलगाउने छैन।
तपाईं ब्रुनो पोन्टीरोलीमा पालना गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको कामको अधिक हेर्न इन्स्टाग्राम र आफ्नो मा वेबसाइट.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » ब्रूनो पोन्टीरोलीले योग गरीरहेका जनावरहरूको चित्रहरू
फायरफक्स सेंडका साथ ठूला फाईलहरू साझेदारी गर्नुहोस्, मोजिलाको नयाँ बेट